China Grooved Mechanical Tee Kugadzira uye Fekitori | Zhihua
Ichi chigadzirwa mhando yegrooved mechanical mechanical, iyo inoshandiswa sechigadziko chakaita kunge chakapatsanurwa chinongedzo chekubatanidza mapaipi ebazi kune rimwe divi mushure megomba riri pakati pepombi yakatwasuka. Mapaipi ebazi akabatanidzwa mumakomba.
Miganhu: 3 "(DN80) - 8" (DN200)
Dhizaini Yakagadzirwa: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
Kubatanidza Standard: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
Kushanda Pressure: 175PSI-300PSI
mm / mukati Zviyero mm Kukura kweBolt Chitupa
Φ L K H HERE.-Saizi mm
ramba uchienderera mberi nekuvandudza, kuve nechokwadi chigadzirwa chemhando yepamusoro zvinoenderana nemusika uye mutengi zvinodiwa zvinodiwa. Yedu yakasimba ine chirongwa chekusimbisa chakatove chakagadzwa cheFekisheni sosi Ductile Iron U-Yakachinjika Mechina Tee yeMoto Kurwisa China Manufacturer, 2ductile Iron U-Yakachinjika Mechina Tee yeMoto Kurwisa China Mugadziri, Tiri pachokwadi pakutarira kumberi kuti tishande pamwe nevatengi kwese kwese. munyika yose. Isu tinofungidzira isu tichagutsa pamwe newe. Isu tinogamuchira neushamwari vatengi kuti vashanyire yedu yekugadzira unit uye vatenge zvinhu zvedu.
Fekitori sosi China Ductile U-Bolted Mechanical Tee, UL / FM Kubvumidzwa Mechina Tee, Isu tinoteedzera manejimendi teneti ye "Hunhu hwakakwirira, Sevhisi iri yepamusoro, Mukurumbira ndewekutanga", uye ichagadzira nemoyo wese uye kugovana kubudirira nevatengi vese. Tinokugamuchira iwe kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo uye tinotarisira kuzoshanda newe.
Pashure: Yakagadziriswa Mechanical Tee
Zvadaro: Kupedzisa Cap
Kuderedza Union Tee